Kedu ihe kpatara ecommerce gị jiri Ngwaọrụ Webmaster Bing? | ECommerce ozi ọma
Ihe Ntuziaka Webmaster Web bu ihe ya na ihe anyi ma taa dika Njikwa Nchọta Google, na mbụ Ngwaọrụ Webmaster Google. Ọ bụ ngwa ọrụ maka njikarịcha saịtị maka injin nchọ Microsoft, Bing. Anyị chọrọ ịgwa gị ọzọ maka uru dị n'iji ya eme ihe Ngwaọrụ Webmaster Bing na Ecommerce gị.
1 Uru nke iji Ngwa Webmaster Bing
2 Uru ndị ọzọ nke iji Ngwaọrụ Webmaster Bing
Uru nke iji Ngwa Webmaster Bing
Bing ka bu isi iyi nke uzo ahia
Ọ bụ eziokwu na Google bụ isi iyi nke ahia ahia, agbanyeghị Bing bụ nke abụọ kachasị elu. Ọbụna amaara ya na akaụntụ maka 20-30% nke okporo ụzọ ahịa kwa ọnwa.
Injin Nchọpụta Microsoft na-agbasawanye ikike ya site na njikọta ya na Yahoo n'ike kemgbe 2010 yana njikọta ya na AOL nke bidoro na mbido afọ 2013. Ahịa ahịa nke Bing n'otu n'otu dị elu, mana ọ bụrụ na agbakwunye ọnụ ọgụgụ Yahoo na AOL Ọ na-enyo na a na-etinye igwe nyocha a n'ụzọ siri ike na ihe ọzọ maka njikarịcha SEO.
Enyele pụrụ iche ngwá ọrụ na data
Ọzọ uru nke Ngwaọrụ Webmaster Bing maka Ecommerce bụ na ọ na-enye akụkọ nyocha, gbakwunyere nyocha saịtị ndị ọzọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ngwaọrụ ya yiri Google Search Console, enwere ike ịchọta ụfọdụ atụmatụ na Bing. Yabụ, ọ ga-adaba adaba iji ngwaọrụ ndị a iji lelee arụmọrụ nke Ecommerce gị na Bing maka ọchụchọ ma ọ bụ nweta ozi eleghara anya na Google.
Uru ndị ọzọ nke iji Ngwaọrụ Webmaster Bing
Yana ndị anyị kwuburu okwu ha, Ihe Ntuziaka Webmaster Web na-enye ndị ọzọ uru maka Ecommerce na weebụsaịtị n'ozuzu, gụnyere:
Nlekota oru nlekota oru
Ọrụ nyocha na ndenye aha
Isiokwu ọchụchọ na njikarịcha ndụmọdụ
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » SEO » Gini mere Ecommerce jiri jiri Ngwa Webmaster Bing?
Gịnị bụ raara onwe ya nye Bochum na kedu uru ya?